- ऊर्जाको श्वेतपत्रः बन्ला त १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट ?
ऊर्जाको श्वेतपत्रः बन्ला त १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट ?
सरकारले केही समयपहिले अर्थव्यवस्थासम्बन्धी श्वेतपत्र सार्वजनिक गरयो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अहिले नेपालको अर्थतन्त्र सबै पक्षबाट जर्जर अवस्थामा रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरे । सो श्वेतपत्रमा विकाससम्बन्धी भविष्यको केही प्रारूप पनि प्रस्तुत गरेका थिए । उनले प्रस्तुत गरेको अर्थतन्त्रको अवस्था त्यस्तो नभएको प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले दाबी गरयो भने अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टले पनि अर्थतन्त्र त्यस्तो अवस्थामा नरहेको देखाए । अहिले ऊर्जामन्त्रीले आफ्नो भावी लक्ष्य समेटिएको महत्वाकांक्षी श्वेतपत्र जारी गरेका छन् ।
माओवादी सरकारका अर्थमन्त्रीसमेत रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जासम्बन्धी श्वेतपत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।
। ऊर्जामन्त्रीले ३ वर्षमा ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य अघिसारेका छन् । उनले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । अर्को, चार वर्षभित्रै बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभीए क्षमताको नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिने र पाँच वर्षमै त्यति नै क्षमताको नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसमेत निर्माण गर्ने आफ्नो श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । यसको रुट गल्छी–रसुवागढी–केरुङ रहनेछ । उनले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेलाई पनि संलग्न गराउने लक्ष्य लिएको बताएका छन् ।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले विद्युत् उल्पादनलाई तीव्रता दिने उल्लेख गरेका छन् । ३ वर्षमा ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र ५ वर्षभित्र ६ हजार मेगावट विद्युत् उत्पादन गरिने मन्त्रीले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । दस वर्षमा विद्युत् खपत बढेर जाने हँदा यो अवधिमा १० हजार मेगावाट विद्युत आन्तरिक खपतका लागि उपयोग गरिने ऊर्जा मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ । मन्त्रालयले ऊर्जामा आमनागरिकको लगानी उपयोग गरिने पनि लक्ष्य लिएको बताएको छ । सरकारले नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत् सेयरधनी भन्ने नारा तय गरेको छ । मन्त्रालयले नाफामूलक आयोजनामा आमजनताको सोझै लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने योजना रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रस्तुत श्वेतपत्रमा सबै प्रदेशमा कमसेकम एउटा ठूलो ऊर्जा आयोजना निर्माण गर्ने योजना रहेको पनि उल्लेख गरिको छ । साना जलविद्युत् आयोजनामा भने प्रदेशको लगानी रहने पनि ऊर्जामन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् ।
अहिले निर्माणको क्रममा रहेका आयोजना र अन्य केही आयोजना निर्माणको प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थाका आधारमा यो श्वेतपत्र आएको स्पष्ट हुन्छ । ऊर्जामन्त्रीले श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेको जति ऊर्जा उत्पादन गर्न अहिलेकै अर्थतन्त्रले त सक्दैन तर आमनागरिकको लगानीले केही थेग्ला । दस वर्षमै १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना भने ज्यादै महत्वाकांक्षी हो । संघीय व्यवस्था लागू भएपछि बढेको खर्च व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई ज्यादै कठिन परिरहेको अवस्थामा यति ठूलो योजना सफल हुन कठिन छ । स्पष्ट र सुविधाजनक बहुमत रहेको वामपन्थी सरकारले अर्थतन्त्रलाई कसरी अघि बढाउँछ त्यसैमा यस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रम निर्भर रहनेछन् ।